WAREEGTO:- M/weyne ku xigeenka Puntland Oo Shaqadii u fasaxay Agaasimaha Socdaalka iyo Jinsiyadaha Puntland Oo uu todobaadkii hore ka joojiyey.
May 22, 2017 - Written by berka83 - Edited byberka83 Madaxwaynaha Dawladda Puntland oo asbuucii hore shaqada ka joojiyey agaasimaha Hay’adda socdaalka iyo Jinsiyadaha Puntland Maxamuud Faarax Ashkir ka dib markuu Madaxwaynuhu ku eedeeyay shaqo xumo, ayaa maanta dib shaqada ugu fasaxay, iyadoo aan wareegtada xafiiska madaxwaynaha kasoo baxday lagu sheegin wax laga qabtay eedayntii hore.
Agaasimaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Puntland Maxamuud Faarax Ashkir.
2-dii bishaan April ayaa Madaxweyne ku xigeenka oo ah kusimaha madaxwaynuhu wuxuu wareegto tan la mid ah shaqada uga joojiyey agaasimaha isagoo si kumeel gaar ah shaqada ugu wareejiyey Ku xigeenka agaasimaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Cabdikariin Maxamed Faarax (Dhagaweyne).
Puntlandone.com ayaa ogaaday in shaqo ka joojinta Agaasime Maxamuud Farax Ashkir ee Todobaadkii hore ay timid ka dib markii wada shaqayn la’aan iyo is fahan darro ay soo kala dhex gashay agaasimaha iyo ku xigeenkiisa, iyadoo markaas wixii ka dambeeyay agaasime ku xigeenku uu madaxweyne ku xigeenka ku beer laxawsaday inuu shaqada ka joojiyo agaasimaha.
Halkaan ka akhri wareegta shaqada loogu fasaxay agaasimaha.